Sababta Ay Man United Heshiis Cusub Uga Saxiixan David De Gea Oo La Ogaaday – Wararka Ciyaaraha Maanta
Sababta Ay Man United Heshiis Cusub Uga Saxiixan David De Gea Oo La Ogaaday
March 23, 2019 kooxda Premier League, Wararka Maanta 0
Kooxda Man United ayaa wadahadalo kula jirta wakiilka David De Gea si ay heshiis cusub uga saxiixdaan goolhayohooda 1-aad.
Hehsiiska Haatan ee Goolhayaha reer Spain ayaa dhici doona dhamaadka xilli ciyaareedka dambe laakiin Maamulka Red Devils ayaa doonaya in ay xiddiga ka saxiixdaan Heshiis cusub oo wakhti dheer ah.
Man United ayaa diyaar u ah in ay De Gea miiska u saarto lacag dhan 350 oo Gini todobaadkii taas oo ah ku dhawaad laba jibaarka 200 kun ee Gini ee uu haatan ka qaato kooxda si ay ugu sii hayaan premier League.
Si kasta ha ahaatee wakiilada xiddiga ayaa doonaya in ay kooxdu xiddiga miiska u saarto lacag ku dhan 500 kun oo Gini todobaadkii taas oo sabab u ah in aanay wali labada dhinac wax heshiis ah gaadhin.
Real Madrid ayaa si gaar ah ula socota xaalada Heshiis kordhinta ee De Gea iyaga oo doonaya in ay ku badalaan goolhaye Thibaut Courtois kaas oo qaab ciyaareed xun ku jira.
De Gea ayaa bartilmaameed wakhti dheer u ah Real Madrid isaga oo xitaa xagaagii 2015 ku dhawaaday in uu ku biiro ka hor intii uuna wakhtigu ka dhicin warqadahana lagubin waayay.
Soo laabashada Zinedine Zidane ayaa la macno ah in ay kooxdu is badal weyn ku samayn doonto xiddigaha Ge Gea ayaana ka mid ah bartilmaameedyada Real Madrid waana sababta ay Man United si aad ah ugu doonayso in ay heshiis cusub uga saxiixato.